५५ वर्षे श्रीमानले हैरान पारे, के दबाई छ ? |
५५ वर्षे श्रीमानले हैरान पारे, के दबाई छ ?
09:50:30 | मुख्य समाचार स्वस्थ्य
विवाहको सुरुवाती दिनमा मेरो श्रीमानको यौनइच्छा तीब्र थियो । त्योबेला शारीरिक सम्पर्क दैनिक हुनुपर्छ र मन भएको खण्डमा दिनको दुई पटक सम्म हुनुपर्छ भन्ने धारणा थियो । त्यो बेला उमेरमा यस्तो धारणा सबैको हुन्छ होला ।
तर, आज उहाँ ५५ वर्ष भैसक्दा पनि उहाँमा यो सोचमा परिवर्तन भएको छैन । म भने यो सोचको विपरीत छु । यही कारण उहाँ म माथि के आरोप लगाउनु हुन्छ भने मैले उहाँसँगको यौन सम्बन्धलाई बुझ्न सकेको छैन ।
केहीपछि उहाँको परस्त्रीसँग यौन सम्बन्ध भएको पनि थाहा पाएँ । म सातामा एकपल्ट र उहाँ दैनिक एकपल्ट भन्ने कुरामा झगडा गर्दागर्दै हाम्रो विवाह सम्वन्ध भएको यत्रो वर्ष बितिसकेछ । मैले अहिले आएर थाहा पाएँ, उहामा मनोरोगको कारण यौन चाहना तिब्र भएको रहेछ । यसको कुनै उपचार सम्भव छ रु यसको कुनै औषधि छ रु बताई दिनुभए आभारी हुनेथिएँ ।
धेरैअघि बेलायतमा गरिएको एउटा राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार २७।४ प्रतिशत महिलामा र २३।४ प्रतिशत पुरुषमा यौन चाहनामा भिन्नता हुने जनाएको छ । तर, कहिलेकाहिँ महिलामा यौन चाहना पुरुषमा भन्दा बढी हुने पनि पाइएको छ ।
यस्तो समस्या ‘रिलेसन अबसेसिस कम्पल्सिभ डिसअर्डर’ ९आरओसी डी० मा पनि हुने गर्छ । जर्नल अफ सेक्सुयल मेडिसिनमा प्रकाशित एक अध्ययनका अनुसार ९आरओसीडी० कुनै एक पार्टनरमा छ भने यसको सिधै असर यौन सम्बन्धमा र वैवाहिक सम्बन्धमा पर्छ । तपाईले उल्लेख गरेको समस्या हेर्दा तपाईहरु दुवैले यो समस्या कहाँबाट उत्पन्न भइरहेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन जरुरी छ ।